Ụlọ ọrụ na-akpaghị aka na-ewu ewu maka njikwa njikwa search engine weebụ?
Ekwenyere na ụlọ njikọ akwụkwọ ntuziaka na-abawanye na 2017. A tụlere echiche a n'ọtụtụ oge, mana ka ọ dị, ọ dịghị okwu doro anya na ya.
N'ikwu okwu n'ozuzu, ụlọ njikọ njikọ akwụkwọ bụ usoro nke ịgbalịsi ike imekwu ọnụ ọgụgụ nke njikọ na-abata na ebe nrụọrụ weebụ. Ọ bụ oge na-ewe oge nke chọrọ ọtụtụ mgbalị - setting up a home wireless network. Ejikọtara ụlọ njikọ ntuziaka na ụzọ dị iche iche nke ịmepụta njikọ.
Mgbe ị na-achọ saịtị saịtị TOP na niche gị, ị hụ ọnụ ọgụgụ njikọ ndị na-ezo aka na ha. Ha nwere ọtụtụ narị puku ndị na-abata njikọ sitere na ebe nrụọrụ weebụ dị elu na n'etiti. O doro anya na ha anaghị emepụta ihe ha na-emetụ ha n'otu abalị. Ụlọ ọrụ ndị a TOP na-enweta nsonaazụ dị otú a site n'iji ọrụ arụ ọrụ na iji njikọ aka abata.
N'isiokwu a, anyị ga-ekwurịta banyere usoro ụlọ ọrụ ntuziaka na akụrụngwa. Ọzọkwa, anyị ga-atụle otú Google si esetịpụ eriri n'etiti nsụgharị ụlọ na njikọ na-ekwekọghị n'okike. M ga-edepụta ntuziaka bara uru na akụrụngwa azụlinks nke ga-enye gị ezigbo nsonaazụ SEO.
Olee otú ụlọ njikọ njikọ akwụkwọ nwere ike isi meziwanye ọnọdụ saịtị gị?
N'ụbọchị anyị ịmepụta njikọ dị ike karịa mgbe ọ bụla ruru asọmpi dị elu na ahịa dijitalụ na nyocha ọ bụla algorithm na-achọ mgbe niile. Usoro njikọ nke njikọta Google kwadoro taa nwere ike ịbụ usoro ntinye ọhụụ echi. Otú ọ dị, n'agbanyeghị ihe ndị a niile na-adịghị mma, backlinks ka na-eduga ike nke nwere ike imeziwanye saịtị gị ma nyefee okporo ụzọ na ebe nrụọrụ weebụ gị. Webmasters ndị na-achọghị iji oge dị ukwuu na-ekepụta njikọ njikọta na-ezo aka na ngwanrọ njikọ njikọta ma ọ bụ na-achọ ohere ụlọ ọrụ akwụ ụgwọ. Otú ọ dị, dị ka omume na-egosi, ọ dịghị mma karịa ụlọ njikọ njikọ. I kwesịghị itinye aka na usoro njikọ njikọta aghụghọ dị ka Google ga-achọpụta n'ezie. Anyị bụ ugbu a na ọhụrụ onu nke search engine njikarịcha na inweta ala-mma spammy backlinks nwere ike na-ebibi gị niile SEO mgbalị nakwa dị ka ika aha.
Nkọwa njikọ njikọta megide onye na-akpaghị aka
Dịka ogo dị elu na-ejikọta njikọ ụlọ, ọ dị anyị mkpa ịme njikọ dịka. Ọ bụ ya mere anyị ga-eji zụlite usoro ntuziaka na-arụ ọrụ na ntuziaka nke ga-arụ ọrụ na ihu ọma gị.
Forum na blog kwuru
Comments bụ ụzọ dị mfe ma dị irè nke inweta njikọ, ọ bụrụhaala na ị hapụ ha na PR dị mkpa ma dị elu isi weebụ. Okwu gị dị mkpa ka ị jikọọ na isiokwu mkparịta ụka ma hụ ọdịdị dị n'etiti ndị ọzọ. Google agagh enwe ike ichota ogugu gi ma oburu na ekwuru ya. Ọ bụrụ na eji aka ya eme ya, o yiri ka ọ dị mma, na-adabere na isi ma nwee uru nye ndị ọzọ na-agụ ya. Otú ọ dị, dị ka Google Webmaster Guidelines, nkwupụta forum na njikọ kachasị na post ma ọ bụ mbinye aka agaghị agụ dị ka àgwà na ga-eru iwu.
Nchịkọta ndị ọbịa
Ngwá ọrụ ụlọ ọrụ ọzọ dị irè nke na-arụ ọrụ mgbe nile bụ blọọgụ ndị ọbịa. Ụfọdụ webmasters na-ekwu na ọ bụ usoro ọnyà nke ịmepụta njikọ. Otú ọ dị, a ga-agwa eziokwu, ọ bụrụ na ọ mere n'ụzọ ziri ezi, ọ ga-eweta nsonaazụ kachasị mma. Aga m ekwu banyere akwụkwọ nchịkọta ndị ọbịa dịka akụkụ nke mmeri nyocha kachasị mma. Ịkwesịrị ịmepụta ọdịnaya na ọ bụghị naanị otu ebumnuche iji melite ọkwa gị, ma n'ebumnuche ị wetara ndị na-agụ gị uru. Ọ bụrụ na ịchọta ọdịnaya gị na onye na-agụ ihe, mgbe ahụ i nwere ike iji blọọgụ ndị ọbịa dịka nchekwa akwụkwọ ntuziaka.